Ikotishi elinechibi kanye nepaki elinamahlathi, imizuzu eyi-15 ukusuka eSt Emilion - I-Airbnb
Ikotishi elinechibi kanye nepaki elinamahlathi, imizuzu eyi-15 ukusuka eSt Emilion
Jugazan, Nouvelle-Aquitaine, i-France
I-i-guesthouse ephelele ibungazwe ngu-Stéphanie
U-Stéphanie uthole izilinganiso zezinkanyezi ezingu-5 ezivela ku-95% wezivakashi zakamuva.
U-95% wezivakashi zakamuva unikeze u-Stéphanie izinkanyezi ezingu-5 ekuxhumaneni.
Ikotishi labathandi bemvelo, ekwandiseni ikhaya lethu. Ingaphandle lakhiwe izingxenye ezi-2, eyodwa yangasese enezihlalo zedekhi, itafula lasengadini nezihlalo, izoso, enye evamile, efinyeleleka ngomgwaqo.
Okuvame part engadini yethu, sakhiwa 3000 m2 echibini, epaki ezinamahlathi ka 2ha neziphethu, liyisiphephelo ukuthula kwangempela lapho ungakwazi kakhulu ukujabulela ukuthula lasenza umsindo amanzi kanye ingoma. Izinyoni.
Ubude obungu-300 m2 buhlukaniswe kwaba ngu-2 : 2/3 ngendlu yethu, 1/3 yendlwana.
Mayelana nemibhede, indlwana ilungele abantu abangu-4.
Umbhede wesithathu ekamelweni lesibili umbhede owengeziwe, ogoqwayo, kodwa unomatilasi wangempela (ikamelo lokugcina lesithombe 2).
Usofa nawo uyaguquguquka egumbini lokuphumula kodwa lokhu kwenza igumbi lingasebenzi kahle.
Ukuze uthole izivakashi ezingaphezu kwezingu-5, sicela uxhumane nathi.
Sitholakala ku-1km nje ukusuka edolobhaneni lase-Rauzan lapho uzothola khona amabhikawozi, amabhusha, isitolo esikhulu se-Proxi. Izitolo ezinkulu zokuqala ziku-10 km kude (Super U noma Carrefour).
Indawo yokuhlala iyimizuzu engama-20 ukusuka eLibourne, imizuzu eyi-15 ukusuka eSt Emilion kanye nemizuzu engama-45 ukusuka eBordeaux.
Sihlala esizeni futhi sizokujabulela ukwabelana ngolwazi lwethu lwesifunda nabahambi. Ngiyisazi se-oenology futhi ngingase ngilethe ulwazi lwe-oenological kulabo abathanda lesi sifunda esikhula kakhulu iwayini.
Hlola ezinye izinketho ezise- Jugazan namaphethelo